नेकपाको पपुलर भोट स्थिर, कांग्रेसको... :: मनोज सत्याल :: Setopati
नेकपाको पपुलर भोट स्थिर, कांग्रेसको झन्डै ७ प्रतिशतले बढ्यो
मनोज सत्याल र शोभा शर्मा काठमाडौं, मंसिर १५
प्रतिनिधि सभा/प्रदेश सभा र स्थानीय तहका उपनिर्वाचनको मतपरिणाम आइरहेका छन्। आइतबार दिउँसो ४ बजेसम्म उपनिर्वाचन भएका ५२ पदमध्ये ४४ वटाको परिणाम आइसकेको छ।
अहिलेसम्म प्राप्त निर्वाचन परिणामको संकेत के हो? यसलाई कसरी विश्लेषण गर्ने?
यसलाई विश्लेषण गर्ने दुई प्रमुख आधार छन्- पहिलो, यसपालि जम्मा ५२ स्थानमा निर्वाचन भएको हो। तीमध्ये ४३ वडा अध्यक्ष, तीन वटा गाँउपालिका अध्यक्ष, तीन वटा प्रदेश सभा सदस्य, एक उपाध्यक्ष र एक प्रतिनिधि सभा निर्वाचन निर्वाचन क्षेत्र छ।
यी ५२ ठाँउमा नेकपा र कांग्रेस र नेकपाले कति सिट थपे वा गुमाए।
दोस्रो, देशैभरी रूख र सूर्यलाई प्राप्त पपुलर मत प्रतिशत घट्यो वा बढ्यो।
निर्वाचन भएका ५२ स्थानमध्ये ४४ स्थानको मत परिणाम आइसकेको छ। तीमध्ये नेकपाले २६, नेपाली कांग्रेसले १२ स्थानमा जितेका छन्।
पछिल्लो निर्वाचनमा यी दुई दलले जितेको सिट संख्यामा खासै परिवर्तन भएको छैन। नेकपाले अहिले परिणाम आएकामध्ये अघिल्लो निर्वाचनमा २५ स्थान जितेको थियो भने कांग्रेसले १२ स्थाननै जितेको थियो।
कांग्रेसले एउटा वडा गुमाएको छ भने त्यसको बदलामा भक्तपुरको प्रदेश सभा सिट जितेको छ। नेकपाले कांग्रेसबाट सात वटा वडा अध्यक्ष खोसेको छ भने कांग्रेसले नेकपाबाट ६ वटा वडा अध्यक्ष र एक प्रदेश सभा सदस्य खोसेको छ।
देशैभरीको पपुलर भोटमा भने नेकपाको तुलनामा कांग्रेसले बाजी मारेको छ। नेकपाको पपुलर भोट (लोकप्रिय मत) लगभग स्थिर रहँदा कांग्रेसले पपुलर भोट झन्डै ७ प्रतिशत बिन्दुले बढाएको छ।
देशभरमा आइतबार चार बजेसम्म गनिएको सदर मत १ लाख ४१ हजार ९ सय ७६ मध्ये नेकपाको सूर्यमा ६५ हजार ९ सय २६ मत खसेको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको रूख चिन्हमा ५६ हजार ३४५ मत मत खसेको छ।
अर्थात् नेकपाले जम्मा ४६.४३ प्रतिशत पपुलर भोट ल्याएको छ भने कांग्रेसले ३९.६९ प्रतिशत मत ल्याएको छ। अन्य दलले १३.८८ प्रतिशत मत पाएका छन्।
पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा नेकपा र नेपाली कांग्रेसले ल्याएको पपुलर मतको प्रतिशतसँग तुलना गर्ने हो भने कांग्रेसको मत झण्डै ७ प्रतिशतले बढेको छ भने नेकपाको मत झिनो (झन्डै ०.५७ प्रतिशत) ले घटेको छ। अन्य पार्टीहरूले ल्याएको मत पनि झन्डै सात प्रतिशत नै घटेको छ।
निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार गत प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचनमा ९५ लाख ४४ हजार ८ सय ३३ मत सदर भएको थियो।
जसमा तत्कालीन एमालेले ३१ लाख ७३ हजार ४९४ मत पाएको थियो भने तत्कालीन माओवादी केन्द्रले १३ लाख ३ हजार ७ सय २१ मत पाएको थियो। दुबै पार्टीले निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर उठेका थिए। यी दुई पार्टी मिलेर ४४ लाख ७७ हजार २५१ मत पाएका थिए। जुन कुल मतको ४७ प्रतिशत हो।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गरेको मत ३१ लाख २८ हजार ३९८ छ। जुन कुल मतको ३३ प्रतिशत हो। त्यस्तै अन्य दलहरूले प्राप्त गरेको मत १९ लाख ३९ हजार १८४ थियो। जुन २० प्रतिशत मत हो।
यसरी हेर्दा नेकपाको मत झन्डै स्थिर रहँदा कांग्रेसले यस पटक अन्य दलबाट मत तानेको देखिन्छ। प्रतिनिधि सभाको पछिल्लो चुनावमा २० प्रतिशत मत ल्याएका अन्य दलको मत यसपाली घटेर १३.८८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पहाडबाट धेरै मत ल्याएका विवेकशील साझा, राप्रपा, राप्रपा संयुक्त र नयाँ शक्ति पार्टीको मत यसपाली धेरै खस्किएको छ। यी चारै दलले मिलेर प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकमा ५ लाख ७९ हजार ३ सय ६२ मत ल्याएका थिए। अर्थात् झन्डै ६ दशमलव ०६ प्रतिशत मत यी दलहरुले ल्याएका थिए।
यसपाली यी दलको मत थप खस्किएको छ। धेरै ठाँउमा यी दलका उम्मेदवार नै थिएनन्। उम्मेदवारी दिएका अधिकांश ठाँउमा यी दलका उमेदवारले १ प्रतिशत भन्दा कम मत ल्याएका छन्। नयाँ शक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम मिलेर समाजवादी पार्टी बनेको छ। यो पार्टीले पनि उम्मेदवार दिएका ठाँउमा मधेसमा बाहेक हारीहारी एक प्रतिशत मात्रै मत ल्याएको छ।
यस पटक यी पार्टीको मत खुम्चिँदा प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई लाभ पुगेको देखिन्छ। त्यही कारणले नेकपाको पपुलर मत स्थिर हुँदा कांग्रेसको पपुलर मत बढेको छ।
मधेसमा नेकपा र नेपाली कांग्रेसको तुलनामा राजपा र सामजवादी पार्टीको जनाधार बलियो छ। तर यसपाली मधेशमा थोरैमात्र सिट खाली भएका थिए, त्यसैले उम्मेदवार थोरै थिए। त्यसकारण यसपालीको निर्वाचनमा मधेसी पार्टीको पपुलर भोट कम देखिएको छ। मधेसमा पनि पहाडकै अनुपातमा सिट खाली भएका र निर्वाचन भएको भए मधेसी पार्टीको पपुलर भोट केही बढ्ने थियो भने नेकपा र कांग्रेसको केही कम हुने थियो।
प्रकाशित मिति: आईतबार, मंसिर १५, २०७६, १०:३१:००